warkii.com » QM oo WARBIXIN halis ah kasoo saartay Soomaaliya
Muqdisho (warkii.com) – Qaramada Midoobay ayaa Isniintii ku dhawaaqday in ugu yaraan 3.5 milyan oo qof la saadaalinaayo inay ku dhici doonaan qalalaase ama amni darrada degdegga ah ee cunta yarida ee ka jirta dalka Soomaaliya inta u dhaxaysa bilaha Juun illaa Sebtember.
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isuduwidda Arrimaha Bani’aadamnimada (OCHA) ayaa sheegay in ku dhawaad ​​hal milyan oo carruur ah oo dheeraad ah la saadaaliyay inay nafaqo-xumo hayso.
“Qiyaastii 2.6 milyan oo qof ayaa ku sii jiri doona barokacayaal, ku dhawaad ​​hal milyan oo caruur ah oo dhigta iskuulada ayaa looga bixiyay sababo ka dhashay COVID-19” OCHA ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambaysay ee samafalka.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in illaa iyo bishii Maarso 16keedii kadib markii kiiska ugu horreeyay ee COVID-19 lagu xaqiijiyay Muqdisho, khatarta seddexda ah ee fayraska, daadadka iyo ayaxa ayaa la shaaciyay qalalaasaha bani’aadanimo ee daba dheeraaday ee Soomaaliya.
Waxay sheegtay in qalalaasaha inta badan ay ka dhasheen jahwareer cimilda ah, sanado colaado hubaysan, saboolnimo baahsan ee muddada fog ku jiray in 5.2 milyan oo qof ay gargaar bani’aadamnimo u baahan yihiin sanadkaan 2020.
Sida laga soo xigtay OCHA, roobabkii Gu’ga ee bilihii Abriil-Juunyo ayaa la helay, laakiin saameynta fatahaadda ayaa ah kuwo dhibaato abuuray.
“In kasta oo inta badan barokacayaashu ay ku noqdeen deegaanadoodii, waxay u baahan yihiin caawimaad si ay noloshooda dib ugu dhisaan. Intaa waxaa dheer, in badan oo kamid ah waxay halis ugu jiraan in markale ay saameyn ku yeeshaan marka roobabkii Deyrta ay biloowdaan Oktoobar” ayaa lagu yiri warbixinta OCHA.
Hay’adda Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo 16-kii Maarso, la diiwaan geliyay 3,000 kiis oo CVID-19, taasoo sii xumaynaysa dhibaatada hore u jirtay, carqaladayseysana horumarkii dhaqan-dhaqaale iyo in saameyn ku yeeshay hab-nololeedkii gaar ahaan dadka dakhligoodu hooseeyo iyo qoysaska ku tiirsan xawaaladaha laga soo qaado qaraabada ku nool dibadda.
Waxay sheegtay in fayrasku uu sidoo kale hoos u dhigay raadka banii’aadminnimada ee gudaha dalka iyada oo ay jiraan shaqaale ka shaqeeya deegaanno xaddidan iyo kuwo guryaha shaqooyinka ka qabta.
In kasta oo xannibaadaha la soo rogay, ayay yiraahdeen Qaramada Midoobay, shaqaalaha arrimaha bini’aadminnimada ayaa ku guuleystey inay sare u qaadaan wax ka qabashada cawaaqib-xumada bini’aadannimo ee masiibada iyo taageerada ay siiyaan dowladda iyo waddamada xubnaha ka ah si loo yareeyo faafitaanka iyo saameynta fayraska COVID-19.